Loto mifototra amin'ny tany
Ny fihetsiketsehana ataon'ny olona any amin'ny faritra lavitra any dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny haran-dranomasina. Ny fandripahana ny ala sy ny famerenana ny tanimboly dia miteraka fanimbana any amin'ny renirano sy ny rano amoron-dranomasina. Ny fampiharana ny habetsahan'ny dipoavatra sy ny famonoana bibikely miparitaka amin'ny voly dia mety manasaraka na mivoaka avy ao anaty ala any anaty rano sy ny tontolo iainana amoron-dranomasina.
Fanafarana entana goavana avy amin'ny renirano iray miditra ny Ranomasina Karaiba amin'ny morontsiraka Meso-Amerikana. Sary © Malik Naumann / Marine Photobank
Ny fihoaran'ny biby fiompy dia mampitombo ireo olana ireo; Ny fanesorana ny zavamaniry dia mampitombo ny herisetra. Ankoatr'izay, ny alàlan'ny biby fiompy dia manampy ny fandotoana ny sakafo any amin'ireo faritra amoron-dranomasina. Ny vokatry ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany dia ny fanodikodinam-panafody na ny fanasitranana ny toaka ao anaty rano, ary amin'ny farany mankany amin'ny onja sy ny morontsiraka. Ny sedima, ny sakafo ary ny loto dia afaka manaparitaka amin'ny fako mampitombo mihoatra ny 100 km avy amin'ny vavan'ny renirano. ref
Ny fako voajanahary, na maka tsimoramora na ala any amin'ny morontsiraka na morontsiraka, dia afaka mamono mivantana ny haran-kozatra na mandoto poizina ao anaty rano eny ambony rano, mety hanasongadina ny vatohara.
Fiovan'ny toetrandro, indrindra Fiovan'ny toetr'andro (ohatra, mafana kokoa sy miely matetika any amin'ny faritra sasany) dia mety hampitombo ny fikajiana ary hampitombo ny famitahana sy ny fandotoana ny tontolo iainana any amin'ny morontsiraka. Ny fitomboan'ny isan'ny mponina manerana izao tontolo izao dia mety hitarika amin'ny fitomboan'ny habetsaky ny fambolena sy ny fambolena, izay mety hampitombo ny fampiasana sy ny fanodinana azy.
Ny fandotoana an-dranomasina
Ny loharanon-dranomasina mifototra amin'ny ranomasina dia mety hanimba ny fahasalaman'ny vatohara. Ny sambo ara-barotra, ny fialamboly, ary ny mpandeha dia afaka manimba ny harambato amin'ny alàlan'ny famoahana rano fisotro madio, solika, alim-bary ary fako mahery, ary amin'ny fampielezana karazan-javamaniry.
Nolavina ny fako amin'ny trondro maro nifangaro sy novonoina tany Hawaii. Ny harato dia nirotsaka an-tsokosoko, lozisialy, goatfish, mpitsabo nentim-paharazana, crabs coral, vorona lava, mpihaza lava sy trondro hafa. Sary © Frank Baensch-bluereefphoto.org/Marine Photobank
Ny sambo dia afaka mampiroborobo be ny tontolo iainana any amin'ny tontolo an-dranomasina. Amin'ny herinandro, dia misy sambo fiaramanidina mahazatra mahatratra 800 metatra kilaometatra miala sasatra, metatra kilometatra 3,700 greywater, tapitrisa metatra kilometatra dipoavatra mampidi-doza, 8 taonina fandaniana mafy, ary manodidina ny 100 cubic metatra ny rano balsama. ref Raha ny Fifanarahana iraisam-pirenena misahana ny fisorohana ny fandotoana avy amin'ny sambo (MARPOL) dia manome torolàlana momba ny fanodinana ny ala, ny rano mangatsiaka, ny fako simika ary ny fako mando, ireo fitsipika ireo dia mifanaraka amin'ny ambaratonga hafa. ref
Ny sambon-dranomasina avy amin'ny sambo, anisan'izany ny plastika sy ny fitaovana fanjonoana, dia mety hitera-doza amin'ny vatohara sy hamandrihana karazana an-dranomasina toy ny trondro sy sokatra. Ny fivoahan'ny solika avy amin'ny sambo dia mety hitarika ny vatohara hahatsapa ny fahafatesana ho faty, hanova ny fihenan'ny famonoana, hamoaka zooxanthellae, ary hitarika fahafatesana ho faty, anisan'ireo valin-dresaka hafa. Raha mitaky fitomboana maneran-tany ny fitomboan'ny solika, dia mitombo ihany koa ny habetsaky ny fako. Ny fitaterana an-dranomasina sy ny fizahantany fitsangatsanganana dia mitombo hatrany, ref mitarika mankany amin'ny fivoahana lehibe amin'ny rano maloto, solika, alim-bary, ary fandaniana mafy any amin'ny tontolo an-dranomasina.
Ny fiantraikan'ny fandotoana ny tany sy ny ranomasina
Fandrobana ny ala sy ny fambolena - dia afaka miteraka sediment, sakafo, ary famonoana bibikely any amin'ny renirano sy ny rano amoron-dranomasina
Sediments - dia afaka mamotipotika sy mamono ny vatohara sy ny zavamananaina hafa bentika; Mety hampihena ny fahafahan'ny zooxanthellae amin'ny photosynthesize izay mampitombo ny fitomboan'ny haran-dranomasina
Ny haavon'ny ronono (toy ny nitroka sy ny fosafosa any amin'ny ranomasina amoron-dranomasina) - afaka mitarika eutrophication Ny fitomboan'ny fitomboan'ny fôtôlôkôlônina dia manakana ny hazavana amin'ny vatohara, na afaka manentana ny fitomboan'ny algônina izay mety hitrangan'ny korontana; dia mety hitarika amin'ny hypoxia koa, izay mahatonga ny oksizenina rehetra ao anaty rano hikorontana ny algoma sy ny zavamananaina hafa, mitarika any amin'ny "faritra maty" ary amin'ny farany ho any amin'ny fianjeran'ny tontolo iainana
Fandotoana solika - dia mety hiteraka faharavana sy toetr'andro
Vovon-drano, solika, fantson-drano, ary fako mafy - navoakan'ny sambo ara-barotra, fialamboly ary sambo; Izany dia mety hanimba ny vatohara mivantana ary koa amin'ny fampielezana karazan-javamaniry
Ny loto mifototra amin'ny tany dia azo adika amin'ny alalan'ny karazana politika, planina ary fitantanana. Tafiditra ao anatin'izany ny fomba fiasa amin'ny alàlan'ny fambolena izay mety hampihenana ny fikajiana sy ny fitrandrahana, hampitomboana ny fahampian'ny zezika, ny fikajiana ny tontolo iainana amoron-dranomasina (ala honko sy ny gaza) izay manasitrana sy mamandrika ny fambolena sy ny fiterahana alohan'ny hahatongavana any amin'ny vatohara, ary ny fikojakojana ny zavamaniry eny amoron'ny renirano mba hampihenana ny sakafo mahavelona. any anaty rano. Zava-dehibe ny fitantanana ny morontsiraka dia fitaovana iray natsangana sy nampiharina maneran-tany mba hifehezana ireo olana momba ny fampiasana ny tany amin'ny ecosystems amoron-dranomasina.
Ny fandotoana an-dranomasina mifototra amin'ny alàlan'ny ala dia: ref
Fampandrosoana ny fotodrafitrasa any amin'ny seranana mba hifehezana ny fako entin'ny sambo
Manatsara ny rafitra fitsaboana amin'ny alàlan'ny sambo sy sambo
Mialà eny an-dalamby lavitra
Manala ny rano eny amin'ny renirano mba hampihenana ny fiparitahan'ny karazan-javamaniry any amin'ny morontsiraka
Fampandrosoana drafitrasa mahomby amin'ny solika
Ny firenena manana haran-dranomasina dia afaka manao dingana lehibe amin'ny fampihenana ny fandotoana an-dranomasina amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny lalàna nasionaly izay ahitana fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fahalotoan'ny ranomasina (ohatra ny Fifanarahana momba ny fialana amin'ny fandotoana ny ranomasina amin'ny alàlan'ny fanariana ny ravina sy ny zavaboary hafa 1972, Fivoriana Londres ").